Maitiro Echokwadi Kuti Uve Nehutano Hweganda Paunenge Uri MuWheelchair
Kana uri parizvino kushandisa a wiricheya, zvakakosha zvakanyanya kuyeuka kuti iwe unofanirwa kutarisira zvakanyanya ganda rako. Kutenderera kweropa kwakashata, pamwe nekukanganisa kwekunzwa uye mhasuru mashandiro, zvinogona kutungamira kumanikidza mablisters anokura nekufamba kwenguva.
Kuronga kumberi ndicho chinhu chakakosha kuona kuti ganda rako riine hutano; unogona kudzikisa njodzi yekukudziridza mamiriro eganda nekugadzira tsika dzakanaka kubva pakutanga.
Kudzivirira Pressure Maronda, Pre-Emptive Kurapa
Ive nekuchengera kutarisa pasi uye nenzvimbo dzakatenderedza kune chero maronda ari kukura. Kana iwe wakangwaririra zvakakwana zuva nezuva, unogona kudzivirira kumanikidza maronda kubva mukukura uye kutapukirwa.
Girazi ishamwari yako yepamwoyo kana zvasvika pakutarisa dzinogona kunetsa nzvimbo; iyi imwe nzira yekuva nemumwe munhu, seye muchengeti, achikubatsira iwe mukuita.
Muchengeti anogona kudikanwa kana iwe usina simba rekuzviita wega, kana kana uchitambura nechimiro chinogona kukutadzisa kuita izvi zvakachengeteka.
Chero iwe paunowona nzvimbo inotonhorwa zvinyoronyoro nemaronda ekudzvinyirira, unofanirwa kubata chiremba wako kuti agadzire musangano wekudzivirira maronda aya akavhurika kubva mukutapukirwa.
Enda kune Kunobva Dambudziko
Zvinogara zvirinani kudzivirira chero mhando yeganda kukuvara kubva kuitika, nekuti izvi zvinogona kuve zvinowanzo gumbura nevamwe vashandisi. Paunongowana kumanikidzwa kwakakura zvakakwana, uchafanirwa kutambura kuburikidza nemarwadzo uye nekukanganisa kwekurapa ronda rakavhurika.
Kuva nechikafu chine hutano kunogona kutsigira tsika dzako dzakanaka kuti urege kumanikidza blister kubva mukukura. Izvi zvinosanganisira kwete chete kurapa kwekuvhura ronda, asiwo kudzivirira kweakavhurika ronda nekusimbisa kweganda.
Kudya Kwakanaka kunogona Kubatsira Kudzivirira Matambudziko eGanda
Tsika dzakanaka kana zvasvika pakudya dzinogona zvakare kukudzivirira kubva kukudziridza chirwere chinogona kuita kuti ganda rako riwedzere kunetseka uye zvatova izvo. Zvimwe zvinhu zvinokurudzirwa zviri pamwe nemitsetse seyambiro yapfuura. Tsika dzakanaka dzinogona zvakare kusanganisira kudzivirira kuputa fodya iyo inogona kumanikidza kufamba kweropa, izvo zvinogona kukuvadza kuporesa ganda.
Kana zvasvika pakuchengetwa kweganda, iwe unofanirwa kugara wakangwarira kuti ganda rako rive rakanyorova kana rakanyorova nekuti izvi zvinogona kusimudzira mhando yepasi inotarisana nehuswa uye chirwere cheganda.